Macaan - Wikipedia
Macaan () waa mid ka tirsan shanta nooc ee dhadhanka ee ka midka ah "Shanta Laxaad" ee dadka. Macaanka waxaa loo aqoonsadey dhadhan raaxo iyo macaansi u leh dadka isla markaana raaxo iyo raynrayn muujiya. Noocyada cuntada ka kooban kaarbonhaydarate sida sonkorta ayaa laga helaa macaanka, inkastoo ay jiraan ilo kale oo khiyaali ah oo laga helo dhadhanka macaanka.
zefir macaan ruska
Sidoo kale, dhadhanku waa dareenka uu sheego carabku markuu shay la falgalo. Neerfaha iyo xididada Dhadhanka oo uu la socdo xubnaha urta ayaa sheega nooca dhadhanka shey. Dhadhanku wuxuu ka mid yahay shanta laxaad ee dadka iyo xayawaanku leeyihiin.
Dhadhanku waa dareen uu bixiyo carabku markuu taabto walax sida cunto oo kale isla markaana maskaxda u tebiyo sida waxaldaasi tahay, taasi oo iyadna soo sheegta nooca uu yahay dhadhankiisu.
Macaanka, oo sida caadiga ah loo yaqaano dareen raaxo, waxaa carabku soo saaraa marka ay jirto sonkor iyo waxyaabo la mid ah oo dhadhankoodu macaan yahay.
Unugyada dhadhanka ee carabka ku yaala ee u qaabilsan sheegida macaanka waxaa loo yaqaanaa G borotiin kaasi oo la helo isaga isku xidhan. Walxaha dhadhanka macaan ee carabku sheego waxay ka samaysan yihiin aalada sucrose oo ah jajabka hoose ee sonkorta iyo wixii la halmaala. Qof caadiga ah ee caafimaadka qaba wuxuu awood u leeyahay inuu carabkiisu sheego 10 millimoles oo sonkor ah halkii liter ee dareere ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Macaan&oldid=228181"
Last edited on 8 Jannaayo 2022, at 15:34
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Jannaayo 2022, marka ee eheed 15:34.